Xarafka hore ee Ingiriisiga: waxa ay tahay, taariikhda, sifooyinka iyo isticmaalka guud | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 04/05/2022 17:00 | Fuentes, Khayraadka
Farta iyo qaab-dhismeedkooduba way horumareen, sida taariikhda aynu ognahay ay samaysay oo si yaab leh u horumartay, xataa sida aynu u baranno juquraafiga, sidoo kale farta inagu meelaysa hadba sida ay u dhasheen ama abuurkooda.
Laakin qoraalkan uma aanaan imaan inaan kaala hadalno juquraafiga (inkastoo si gaar ah aan isu raadineyno). Maqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa adduunyo kale oo soo jiidasho leh oo ah xarfaha. gaar ahaan qoraaladii hore ee Ingiriisida ama sidoo kale naqshad ahaan loogu yaqaanay xarfaha madow. Haddii aadan weli garan waxa fartaani bixiso iyo taariikhdeeda, waxaan kugu casuumeynaa inaad na akhrido si aad u ogaato.
Ma bilaabi karnaa?
1 Xarafka hore ee Ingiriisiga: waa maxay
1.2.2 Qarnigii labaatanaad
2 tusaaleyaal wejiyadii hore ee Ingiriisida
2.2 Charlotte hore
2.3 cameo madow
3 Apps si loo helo
3.2 Qoraalada Google
Xarafka hore ee Ingiriisiga: waa maxay
Warqad Ingiriisi hore, sidoo kale adduunka oo dhan loo yaqaan warqad madow, Waa qoraal ka mid ah labada kooxood ee waaweyn ee far-goosiga.. Waa qoraal lagu garto in reer galbeedka aad looga jecel yahay oo aad muhiim u ahaa 1150 ilaa qarnigii XNUMXaad.
Magaceeda waxa loo dejiyay si aanay u dhicin jahawareer ka dhalanaya qoraalka Ingiriisiga ah ee aynu naqaano, taasna waxaa sabab u ah in ay yihiin dad shakhsi ah oo hal abuur leh oo ilaashada dhinacaas qadiimiga ah iyo mugdiga ah meel kasta oo ay tagaan. Hadda, Waxa kale oo lagu sifeeyaa sababtoo ah isticmaalkooda ayaa weli jira, dhab ahaantii waxaa jira hay'ado ama shirkado kuwaas oo isticmaala xarfaha gothic-ga noocan ah sababtoo ah waxay si fiican isugu daraan waxay rabaan inay muujiyaan.
Waa buug-gacmeed, jidh ahaan aynu odhan karno waxa uu ka kooban yahay faalig aad u qaro weyn. Waa far il-qabad leh.
Caadi ahaan waxay ka kooban yihiin ductus calligraphic , kaas oo la mid ah farta gacanta lagu qoray ee gacanta lagu sameeyay oo aad u farshaxanimo badan. Dhinac macne badan ka yeeshay buugaag hore iyo buug-gacmeedyo badan. Aad bay u badan tahay in la arko wejiyada noocaan oo kale ah oo ka muuqda curiyaha noocaan ah, wax soo jiidanaya dareenka badan.
Maaddaama ay sidoo kale tahay nakhshad si cadaalad ah loo qaabeeyey, boodhadh badan ama dabool filimaan ayaa inta badan door biday nooca font. Waa naqshad isku dareysa cinwaanno aad u wanagsan, taasoo u sahlaysa daawadayaasha inay kala furfuraan oo ay meel fog ka arkaan. Shaki la’aan, waa yaabka qoraal-qorista oo aan ka bixin qaab-dhismeedkiisa.
Sida aad hoos ku arki doontaan, waa mid ka mid ah ilaha taariikhda badan ee gudaha ku jira. Si taas loo sameeyo, waa inaan dib ugu laabanaa hal-abuurradii ugu horreeyay iyo korriimadoodii. Dhinac si weyn loogu nuuxnuuxsaday qaabkeeda.
Qoraalkii hore ee Ingiriisiga sidoo kale waxa uu matalay inta badan diinta waagaas, isagoo ah jilaagii kitaabbada badan. Sababtaas awgeed, mar kasta oo aan helno buug duug ah, waxaan inta badan u mahadcelineynaa oo aragnaa qoraalkan iyaga oo ku jira.
Waa far aan waxba ka tagin, kana kooban sannado iyo sannado taariikhi ah oo ay xiiso badan tahay in aan idiin soo bandhigno mar haddii aad fahmi doonto isticmaalkeeda iyo adeegsigeeda oo qayb ka ahaa horumarkeeda. Ka sokow, Waxa kale oo ay muujinaysaa qaar ka mid ah jilayaasha sida Gutenberg, oo aad malaha hore uga maqashay dunida daabacaadda iyo samaynta qoraallada.
Sheekadu waxay dib u soo noqonaysaa markii, ka dib markii la abuuray, loo isticmaalo mid ka mid ah buugaagtii ugu horeysay ee la daabacay, oo qayb ka ahaa Gutenberg. Qoraalkii hore ee Ingiriisidu waxa uu si ballaadhan u kobcay Galbeedka ilaa badhtamihii qarnigii XNUMXaad.
Sannado ka dib, waxa soo baxay waxa aan u naqaanno kala duwanaansho, maantana waa kuwa ugu muhiimsan kooxahooda, sida farta caanka ah ee Fraktur. Waqtigaas, farta Gothic-ka ayaa si joogto ah loo isticmaali jiray si loo daabaco Baybalka iyo noocyada kale ee buugaagta, illaa sannado ka dib waxaa billowday in buug-yaraha iyo warqadihii ugu horreeyay lagu daabaco noocyadan farta ah.
Sannado ayaa ka soo wareegay oo Jarmalku waxay sameeyeen fartani ma noqon mid caan ah daabacaadda, maadaama ay ka kooban yihiin istaroogyo waaweyn oo aad u qaro weyn. aad bay u adkeyd in la akhriyo oo aan ahayn doorasho wanaagsan xagga akhriska. Laakiin waxaa la sii waday in la isticmaalo ilaa qarnigii 1920aad, markii XNUMX, ka dib markii ay caan ku yihiin naqshadeeyayaasha badan, waxay tixgeliyeen in nooca font uusan ku habboonayn tobanka sano ee hadda jira, sidaas darteed, waxay u tixgeliyeen wax kasta oo casri ah.
Adeegsigeedu waxa uu dhacay mar kale xilligii Nazi-ga ka dib, markii Hitler uu u beddelay farta dadka. Markaa mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah qoraallada waxay ahayd inay ka kooban yihiin xarfaha noocaan ah. Sidan ayuu mar kale u soo ifbaxay Fraktur oo caan ah, ka dib markii uu sannado badan ku qaatay hadhka.
Waqtigan xaadirka ah, nashqada noocan ah waxaa laga helaa alaabooyin badan oo aan isticmaalno oo aan xitaa ogaan. Haddii aan sii dheeraado, astaanta biirka Corona ee caanka ah waxay u adeegsatay naqshad noocan oo kale ah calaamadaheeda biirka, iyada oo ujeedadu tahay Bixi nakhshad aad u badan oo qarniyadii dhexe ah. Naqshad aan waligiis ka bixi doonin qaabka.
tusaaleyaal wejiyadii hore ee Ingiriisida
Xigasho: Warshadda Hal-abuurka
Baron madow waxa loo tixgaliyaa mid ka mid ah wajiyada xarfaha hore ee gaarka ah oo leh qurux aad u saraysa oo fudud ka dhigaya far keliya. Muuqaalkeeda mugdiga ah ayaa ka dhigaya far aad u kobcisa oo soo jiidasho leh.
Dhinac si aad u wanaagsan isugu daray naqshadda dhexe. Inta badan fartan waxay isticmaashaa xarfo kiis dhaadheer oo loo qaabeeyey in si habboon loo isticmaalo. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale lagu gartaa farqiga weyn ee lagu arki karo istaroogga. Qaar ka mid ah istaroogga oo ka sii socda wax ka yar ilaa ka badan.
Xigasho: Envato Elements
Waa mid ka mid ah kuwa ugu hal-abuurka badan uguna gaarka ah qoraallada. Loo tixgeliyey farta madow laakiin leh hawo gaar ah iyo dhiirigelin ka timid fartii hore ee calligraphic. Way ku habboon tahay haddii isticmaalkeeda lagu dabaqi doono qoraallo waaweyn, taas oo u baahan in fiiro gaar ah laga yeesho daawadayaasha. Aad bay u badan tahay in lagu arko iyada oo lagu dhejiyay boodhadhka, naqshadeedu sidoo kale waa mid si cajiib ah u shaqeysa.
Waa farta aad u baahan tahay inaad si dhakhso leh oo fudud u qurxiso mashaariicdaada. Intaa waxaa dheer, waxaad haysataa labadaba sanduuq sare iyo sanduuq hoose, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud in loo isticmaalo codsiyadeeda.
Waa xaraf aad u dhammaystiran nashqadaheeda awgeed. Intaa waxaa dheer, waa mid aad u hal abuur leh oo ka kooban dhinac si fiican u shaqeynaya naqshadeynta tattoo. Waxaa lagu gartaa istaroogga iyo qaabka xarfaha, kuwaas oo bixiya muuqaal aad u firfircoon.
Dhab ahaantii, nooca noocaan ah ayaa horeyba loo isticmaalay xitaa noocyada dharka, taas oo ka dhigaysa font casri ah iyo, isla mar ahaantaana, leh hawo gaar ah oo classic iyo gothic. Shaki la'aan, font ku habboon kuwa ku dhiirada inay adeegsadaan oo aan rabin inay ogaadaan.
Blackhead waa farta madow oo ka kooban macnayaal ka da'weyn oo ka sii caadi ah marka loo eego qaar ka mid ah kuwa aan horey kuugu tusnay liiskan. Nashqaddeedu waa geometric aad u badan oo waliba ka kooban naqshad bixisa hawo qani ah oo gaar ah. taas oo bixin karta dhammaan hawlaha suurtogalka ah ee naqshadahaaga.
Intaa waxa dheer, nashqaddeedu waxay ka dhigaysaa far ku habboon in lagu dabaqo qoraalka weyn iyo qoraalka socda labadaba. Faahfaahinta ilaa maanta way adkeyd in la gaaro sababtoo ah waa far aan la akhrin karin. Shaki la'aan, yaabab naqshadeed oo dhan.
Apps si loo helo
Waxay u badan tahay inay tahay goobta loogu raadinta badan yahay browserka oo dhan, marka la raadinayo font. Ka kooban in ka badan 500 oo qaabab iyo naqshado kala duwan. inteeda kale, Waxa kale oo ay ka kooban tahay liis ballaadhan oo qaybaha aad ka heli karto midda saxda ah mar kasta.
Shaki la'aan waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu kobcin karo naqshadahaaga oo sidan, awood u yeelo inaad hesho qoraal-gacmeedka aad raadineysay. Intaa waxaa dheer, dhammaantood waa bilaash, iyo qaababka kala duwan ee ay ku jiraan ayaa horay loogu daray soo dejinta. Ha lumin fursadda aad ku eegi karto bogga isku xirka aan bixinay.
Waa doorasho kale oo aad u taagan. farta google Waxay leedahay kumanaan iyo kumanaan ikhtiyaar oo kala duwan, dhamaantood waa bilaash. Intaa waxaa dheer, waxa ku jira qaar aad loo jecel yahay oo ay sidoo kale si weyn u isticmaalaan naqshadeeyayaasha iyo naqshadeeyayaasha. Shaki la'aan, ikhtiyaar aanad ku seegi karin midkoodna oo aad haysato hal gujin oo keliya.
Intaa waxaa dheer, soo dejintu waa mid aad u fudud oo haddii aad la shaqeyso qaar ka mid ah codsiyada Adobe ama qalabka, rakibidda ayaa la sameeyaa isla markiiba, laga bilaabo markaad ku rakibto font-ka qalabkaaga. Hab cusub oo shaqo.
Xarfaha hore ee Ingiriisiga ayaa la isticmaalayey sannado, waa qoraallo lagu garto inay ka kooban yihiin taariikh badan oo naqshadahooda ah. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban yihiin qoysas badan iyo qoys hoose, sidaas darteed buug-yarahaagu waa mid aad u ballaaran. Haddii aad internetka ka baarto, waxaad ka heli kartaa kumanyaal iyo kumanaan ikhtiyaar oo kala duwan, kuwaas oo, iyaga ka mid ah, ilaalinaya tafaasiisha aad isku midka ah, tusaale ahaan istaroogga, kuwaas oo inta badan aad u dhumuc weyn.
Waxaan rajaynaynaa inaad waxbadan ka baratay farta noocaan ah oo noqotay mid aad moodo in ay ka mid tahay noocyada caanka ah ee aynu maanta naqaano. Taariikhdu mar walba way isbedeshaa laakiin waxaa jira ilo had iyo jeer hadhsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » xaraf Ingiriisi hore